အဆင့်ဆင့် Arduino ဖြင့်အိမ်အလိုအလျောက်မည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
Joaquín Garcia က Cobo | | Arduino, စက်ရုပ်
una အိမ်အလိုအလျောက် အိမ်နှစ်လုံး၊ စနစ်တစ်ခု၊ အတွင်းပိုင်းစနစ်နှင့်ပြင်ပစနစ်ပါ ၀ င်သောအိမ်တစ်လုံးဖြစ်သည် သူတို့အိမ်နှင့်ပတ်သက်။ ဖြစ်ပျက်သမျှကိုတိုင်းတာရန်၊ ထိန်းချုပ်ရန်နှင့်အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုရရှိရန်အတွက် smart devices များသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တောင်းဆိုမှုများကိုတုန့်ပြန်သောစနစ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
မကြာသေးမီလများအတွင်းအိမ်အလိုအလျောက်အောင်မြင်မှုသည်ထိုအချက်ကြောင့်ဖြစ်သည် အလွန်အမင်းကျဆင်းသွားသောဤထုတ်ကုန်များ၏စျေးနှုန်း ထို့အပြင် Free Hardware မှမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုမည်သည့်အိမ်နှင့်အခြေအနေနှင့်မဆိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။ ငါတို့ပင်လျှင်တည်ဆောက်နိုင်သည်။
6 ငါ့အိမ်အလိုအလျောက်အဘို့အ Butler ရှိဖို့ကိုဘယ်လို?
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်အလိုအလျောက်တည်ဆောက်မှုကိုအထောက်အကူပြုမည့်အသေးစားစီမံကိန်းများသို့မဟုတ် gadget များအကြောင်းမပြောခင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအိမ်အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောဘုံဒြပ်စင်များစာရင်းကိုပြုလုပ်တော့မည်ဖြစ်သည်။
အားလုံးပထမ ဦး ဆုံးရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် အိမ်တစ်အိမ်လုံးတွင်အလုပ်လုပ်သော router နှင့်အစွမ်းထက်သောအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်router လုပ်ဆောင်မှုမရောက်ရှိနိုင်သောသေသပ်သောဇုန်များ၊ အခန်းများမရှိနိုင်ပါ။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည် router ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ အိမ်တွင်းလုံခြုံမှုကဲ့သို့သောအခြားကိစ္စရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် router နှင့် Internet access နှစ်ခုလုံးသည်အရေးကြီးသည်။
Raspberry Pi တွင် Netflix ကိုဘယ်လိုကြည့်ရှုမလဲ
နောက်ထပ်ဘုံဒြပ်စင်ဖြစ်ပါတယ် Raspberry Pi ဘုတ်အဖွဲ့။ အချို့သောစီမံကိန်းများအတွက်လိုအပ်သည့်အပြင် Raspberry Pi board သည်အသိဉာဏ်ရှိသောဒြပ်စင်အမျိုးမျိုး၏တောင်းဆိုမှုများနှင့်အမိန့်များအားလုံးကိုစီမံသည့်ဆာဗာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Raspberry Pi ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အပြုသဘောဆောင်သည့်အချက်မှာ၊ ၎င်း၏သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား, ၎င်း၏စွမ်းအင်နှင့်၎င်း၏နိမ့်သောစျေးနှုန်း.
Arduino Yun နှင့် Arduino UNO သူတို့ကအစအိမ်အလိုအလျောက်ဖန်တီးရန်လိုအပ်သောအဖော်များဖြစ်လိမ့်မည်။ လေအေးပေးစက်များ၏လည်ပတ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်သို့မဟုတ်ဒီဂျစ်တယ်သော့ခတ်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်၊ ဤသံမဏိပြားများသည်လိုအပ်သော၊ စျေးသိပ်မကြီးသော၊ လူကြိုက်များသည်။
အ အာရုံခံကိရိယာ သူတို့လည်းလိုအပ်ပေလိမ့်မည်၊ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်စိတ်ရှည်ပြီးစိတ်ရှည်ရမည် အာရုံခံကိရိယာကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကိုသိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်အိမ်တွင်ရှိလိမ့်မည်တစ်နေ့လုံး ၃၆၅ ရက်လုံးလုံးအလုပ်လုပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာမည်သည့်အမျိုးအစားသို့မဟုတ်မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်မှအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
အိမ်အလိုအလျောက်၏အနာဂတ်မှာ၎င်းသည် voice command များမှတဆင့်အလုပ်လုပ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်နယ်ပယ်အားလုံးနှင့်အရာများစွာအတွက်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှိရန်လိုအပ်သည်။ အင်တာနက်သုံးနိုင်သောစမတ်ဖုန်းတစ်လုံး။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် Android စမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ ထုတ်လုပ်သူများစွာသည်ဤ operating system တွင် Apple ၏ iOS ထက်ပိုမိုအလုပ်လုပ်ကြသည်။
Raspberry Pi စီမံကိန်းများ
အိမ်တွင်းအိမ်၏အလင်းရောင်သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအများဆုံးရရှိခဲ့သောအရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ တကယ်တော့ငါတို့ရှိသည် မည်သည့်မီးခွက်တွင်မဆိုတပ်ဆင်နိုင်သည့်စမတ်မီးသီးအမျိုးမျိုး ကောင်းသောဆက်သွယ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်ပြီးနေ့၏အချိန်သို့မဟုတ်အရသာပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ လက်ရှိတွင်ဤ smart မီးသီးများသည်ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာလူတိုင်းတွင်ဤအမျိုးအစားမီးသီးများအားလုံးမတတ်နိုင်ပါ။
ဒီတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည် RGB မီးအလင်းရောင် သူတို့ကို Arduino Yun ဘုတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပါ၊ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာအခန်းတစ်ခန်းရဲ့အလင်းရောင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ RGB ဦး ဆောင်သောမီးများသည်စမတ်မီးလုံးထက်များစွာစျေးနှုန်းချိုသာပြီးကျွန်ုပ်တို့ပုံသဏ္theာန်သည်မီးသီးများထက် ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ သို့သော်စမတ်မီးလုံးတစ်လုံးလျင်မြန်စွာတပ်ဆင်ထားသည်မှာမှန်ပါသည်။
အိမ်၏လုံခြုံမှုသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရာဖြစ်ပြီးအလွန်အရေးကြီးသည်။ လက်ရှိတွင်အိမ်အလိုအလျောက်အိမ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်စမတ်သော့ခလောက်စီမံကိန်းများနှင့်အတူဖွင့်လှစ်ထားသည် လက်ဗွေ သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းဖြင့်။
ဒုတိယအဆင့်မှာထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည် အိမ်နှိုးဆော်သံကိုဖန်တီးရန်အားလုံးအခန်းများအတွက်ရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာသို့သော်ဤစီမံကိန်းများမှာကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အသိပညာမရှိသောအိမ်များမှာတူညီသောပြhaveနာများရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်းအိမ်သုံးအလိုအလျောက်အတွက်လုံခြုံရေးသည်စောင့်နေဆဲဖြစ်သည်။
အိမ်တစ်အိမ်၏လေအေးပေးစက်သည်အလွန်ခက်ခဲသော်လည်းပုံမှန်အိမ်တွင်ရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်ကိုကောင်းမွန်စွာအကာအကွယ်ပေးရန်သေချာအောင်ပြုလုပ်ရမည်။ အခိုက်အတန့်များစွာရှိသောကြောင့်ဤသည်အရေးကြီးသည် ကျနော်တို့အသိဉာဏ်လေအေးပေးစက်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာကျနော်တို့အိမ်မှာဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ အကယ်၍ ၎င်းကိုကောင်းစွာအကာအကွယ်မပေးပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အပူသို့မဟုတ်လေအေးပေးစက်ကိုအသုံးမကျသောနည်းလမ်းဖြင့်ဆန္ဒရှိသည့်ရလဒ်မပါဘဲဖြုန်းတီးလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အိမ်အလိုအလျောက်အိမ်ခွဲထုတ်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့တွင်အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ရသည် တစ်ခု Arduino ဘလူးတုသ်ဘုတ်အဖွဲ့ အခန်းတိုင်း၌။ အပူချိန်သတင်းအချက်အလက်ကိုဗဟိုကွန်ပျူတာသို့ Raspberry Pi သို့ပို့လိမ့်မည်။ Raspberry Pi တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် algorithms ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည် အခန်းတစ်ခန်းသည်အပူချိန်တစ်ခုရောက်သောအခါလေအေးပေးစက်သို့မဟုတ်အပူကိုမြှင့်သည်.
အိမ်သုံးအလိုအလျောက်၏ဤရှုထောင့်တွင်လေအေးပေးစက်များနှင့်အပူပေးစက်များသည်အသိဉာဏ်မရှိသောကြောင့်၎င်းကိုရရှိရန်ခက်ခဲသည်။ ယင်းအတွက်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာမှာပိုမိုစျေးကြီး။ အခြားနည်းလမ်းများနှင့်မကိုက်ညီသောစီးပွားဖြစ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုအိမ်တွင်းအလိုအလျောက်၏ဤရှုထောင့်၌တိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာပြုလုပ်သည်။
ယခင်ကကျွန်ုပ်တို့သည်အလင်းကိုမည်သို့စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရမည်သို့မဟုတ်စမတ်အလင်းရောင်ရှိပုံကိုပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလင်းနှင့်ဆက်သွယ်သောဂီတချည်တစ်ခုကိုလည်းဖန်တီးနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းချက် စမတ်ပီရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်.
ဒီရှုထောင့်မှာ Amazon Echo, Google Home ဒါမှမဟုတ် Sonos စတဲ့ ၀ ယ်ယူနိုင်တဲ့မော်ဒယ်များစွာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ရဲ့စပီကာတွေကိုလည်းဖန်တီးနိုင်တယ်။ စမတ်ကျောထောက်နောက်ခံပြုရန်ကြိုးစားသည့်စီမံကိန်းများစွာရှိသည်။ ဒီရှုထောင့်မှာတော့စပီသည်ထင်ရှား။ Google က Raspberry Pi Zero နဲ့အတူကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ အချို့သောစပီကာများထက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ပြီးအခမဲ့ပြီးစျေးသက်သာသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုရွေးချယ်ပါက၊ တေးဂီတကိုသိမ်းဆည်းရန်သိုလှောင်မှုကြီးမားရန်လိုသည်ကိုသတိရပါ.
ငါ့အိမ်အလိုအလျောက်အဘို့အ Butler ရှိဖို့ကိုဘယ်လို?
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် အိမ်သုံးအလိုအလျောက်ပြုလုပ်သောအကောင်းဆုံးသောအရာများအနက်တစ်ခုမှာ virtual assistants များဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့၏အောင်မြင်မှုသည်၎င်းတို့အားစမတ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်အခြားကိရိယာများသို့ယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်။
Butler သို့မဟုတ် virtual assistant တစ်ခုရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဗဟိုဆာဗာတွင်သို့မဟုတ်စမတ်ကိရိယာများအားလုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Raspberry ဘုတ်တွင် Artificial Intelligence ထည့်သွင်းရမည်။ များစွာသောအခမဲ့အစားထိုးရှိပါတယ် နဂါး o မိုက်ခရို Amazon Echo မှ Alexa သို့မဟုတ် Google Home မှ Google Assistant စသည့်စီးပွားဖြစ်ဖြေရှင်းချက်များကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ရွေးချယ်မှုသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
၏သင်တန်းကတိုးတက်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်များစွာသောရှုထောင့်များတွင်၎င်းတို့တွင်တိုးတက်မှုအတွက်နေရာများစွာရှိသည်။ ဘယ်လိုအလင်းရောင်တွင်တိုးတက်မှုနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်နေရာလည်းရှိသည်။
အရာရာတိုင်းဟာငါတို့ကိုယ်တိုင်၊ ငါတို့အိမ်နှင့်အမှီအခိုကင်းမဲ့သော Hardware များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကိစ္စများစွာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြweနာကိုဖြေရှင်းရန်သို့မဟုတ်အိမ်တွင်းအလိုအလျောက်ပြုလုပ်မှုကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားသောအသိဉာဏ်ရှိသောကိရိယာများကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် Free Hardware ၏အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ မထင်ဘူးလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Arduino » ခြေလှမ်းများဖြင့်အိမ်မှာအလိုအလျောက်ခြေလှမ်းကိုဖန်တီးရန်
morse code translator သို့သင့်ဘာသာစကားကိုဖန်တီးပါ
LCD ဖန်သားပြင်နှင့် Arduino